အကောင်းဆုံး Single Column Vertical Lathe Lathe ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ | သန့်စင်ပါ
ဤစက်သည်မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိနှင့်အလွိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများ၊ သံသတ္တုအတွက်သံမဏိနှင့်သံမဏိမဟုတ်သောအစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆလင်ဒါအတွင်းအပြင်ဘက်၊ အဆုံး၊ ကြမ်းတမ်းသောအချောသတ်စက်စသည်တို့ကိုအသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။
၁။ အလင်းတန်းလမ်းညွှန်နှင့်သိုးထိန်းလမ်းညွှန်ကို super audio quenching (HRC≥50) ဖြင့်ကုသပြီးလမ်းညွှန်လျှောမျက်နှာပြင်ကိုပလတ်စတစ်ဖြင့်ကုသသည်။ အချိန်ကြာမြင့်သည်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအားအနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်ထက်ပိုကြာရှည်နိုင်သည်။
၂။ အရည်အသွေးမြင့် Castings များနှင့်ပြည်တွင်း dafang ကိုက်ညီသောပုံသွန်း (HT300)၊ အတုအပူအိုမင်းမှုကုသမှု။ Castings သည်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း၊ စက်အလေးချိန်နှင့်စံအလေးချိန်တို့ကိုမကုသပါ။
3. ငါးချက်ဓားစားပွဲသည် high precision mouse tooth disc positioning, 120 equal parts positioning, ခိုင်မာတောင့်တင်းမှု (ရိုးရာငါးပိုင်းတည်နေရာပန်းကန်နှင့်မယှဉ်ပါ) ။
2-axis ဒစ်ဂျစ်တယ် display တပ်ဆင်ထား 4.Standard တပ်ဆင်ထားသည်။
၅။ လျှပ်စစ်သည် Japan omron PLC ထိန်းချုပ်မှုကိုလက်ခံသည်၊ လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများသည်အရည်အသွေးမြင့်အစိတ်အပိုင်းများ၊ စံ (CE standard) ဝါယာကြိုးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်ခံသည်၊ လျှပ်စစ်စက်တစ်ခုလုံးတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသည်။
6. Electronic rotary valve, 16 mechanical speed သည်အဆင်ပြေသည်၊ ထိလွယ်ရှလွယ်ပြီးစိတ်ချရသည်။
၇။ တိကျသောဂီယာကြိတ်စက်နှင့်ဂီယာကြိတ်ထီး (အဆင့် ၆ တိကျမှု)၊ ဆူညံသံနည်းခြင်း၊ စစ်ဆင်ရေးဘာသာပြန်ခြင်း
၈။ JB/T4116-96 ဒေါင်လိုက်စက်ခုံတိကျမှုစစ်ဆေးရေးစံနှုန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။
ဒေါင်လိုက်ကြိတ်စက်များအတွက် JB/3665-96 နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များ
၉။ အဆင့်မြင့်ပြီးပြည့်စုံသောပြုပြင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနည်းပညာကိုအရည်အသွေးမြင့် ချ၍
11. ပြီးပြည့်စုံသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုသူများသည်ကိရိယာများကိုပြင်ဆင်ရန်သာလိုအပ်ပြီးတိုင်းတာရေးကိရိယာများကိုချက်ချင်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောအရောင်းအ ၀ ယ် ၀ န်ဆောင်မှု (ကြိုတင်ရောင်းခြင်း၊ ရောင်းခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ အာမခံပေးခြင်းစသည်) အတိုင်း ၁ နှစ်အာမခံသည်။
၁၂ ။ ရွေးချယ်နိုင်သောပုံစံသတ်မှတ်ချက် - အိပ်ရာ၊ တိုးချဲ့သိုးထီး၊ စတုရန်းသိုးထီး၊ Side Tool Rest စသည်
ယခင်: CNC အလှည့်ဌာန
နောက်တစ်ခု: နှစ်ထပ်ကော်လံ Vertical Lathe
မက်စ်။ workpiece ၏အမြင့်
မက်စ်။ workpiece အလေးချိန်
နှစ်ထပ်ကော်လံ Vertical Machining Center
ဒေါင်လိုက် Single Column Turning Lathe
အလျားလိုက်စက် CDE-A Series 52mm Spindle Bore
အလျားလိုက်စက် CDS-BSeries 82mm Spindle Bore ...